Nosy New Paradise Paradise Mergui Archipelago: fisokafan'ny eco-resort Chic
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nosy New Paradise Paradise Mergui Archipelago: fisokafan'ny eco-resort Chic
Febroary 13, 2019
Toerana fialan-tsasatra tsara tarehy. Awei Pila, dia nosokafana vao tsy ela akory izay tao amin'ny nosy tropikaly Mergui, miala ny moron'ny atsimon'i Myanmar sy Thailand, izay manolotra fitokanana manokana sy fampiononana lafo vidy amin'ny kapa tsy misy tongotra.
Ilay toeram-pialan-tsasatra 5-kintana, misy villa lay 24 miaraka amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina misy crème 600 m, no hany trano itoeran'ny nosy mbola tsy novolavolaina, tao amin'ny nosin'ny mistery taloha izay tsy dia voafetran'ny rehetra nandritra ny am-polony taona maro.
Natsangan'ny orinasam-pizahan-tany fizahan-tany any Myanmar, Memories Group izay misy koa Balloons Over Bagan sy Burma Boating, ary koa hotely fivarotana bizina any Yangon, Loikaw, Mawlamyine ary Hpa'an, Awei Pila dia nahazo ny vahininy voalohany vao tsy ela akory izay. Nilaza ny Tale Jeneraly Jon Bourbaud fa ny tanjona amoron-dranomasina sy ny ala dia manome endrika manokana ny rendrarendra maharitra, manome ny vahiny fialan-tsasatra manokana ary mitazona ny fifandanjan'ny tontolo iainana ao amin'ny nosy.
Ny afovoan'ny toeram-pialan-tsasatra no faritra fandraisam-bahiny lehibe misy dobo tsy manam-petra izay manome endrika toy ny nofinofy manerana ny fasika amoron-dranomasina malefaka mankany amin'ny rano mangarahara amin'ny Ranomasina Andaman.
Ahitana tranolay lamba 'yurt' boribory miparitaka manerana ny ala tropikaly ao amin'ilay toeram-pialantsasatra, izay eo ambonin'ny lampihazo misy toerana hipetrahana sy fandroana ala mando manome vahiny saika 60 metatra toradroa ny habaka manokana. Ireo mpankafy amin'ny valindrihana mahaliana, ny aircon miafina, ny mpandahateny Bluetooth, ary ny vata fampangatsiahana minibar dia manome fiononana fanampiny, na dia ny ranomasina aza, ny fampiasana ny famaranana ny vokatra voajanahary, ny vokatra spa veromanitra ary ny fahitana ny fasika sy ranomasina dia manome fahafaham-po ho an'ny vahiny sy famelomana indray ireo voajanahary.
Misy detox nomerika ihany koa, tsy misy fandrakofana finday hita manerana ny nosy, na dia manome wifi amin'ny alalàn'ny zanabolana aza ny toeram-pialan-tsasatra ary manana rafi-telefaona ao anatiny ao aminy. Awei Pila dia manana fanoloran-tena ho toeram-pialofana maintso, miaraka amina tetik'asa ara-tontolo iainana isan-karazany ao anatin'izany ny panneaux solaire ho an'ny famokarana herinaratra, ny rano avy amin'ny loharano voajanahary, ny volon-tany sy ny menaka manitra amoron-dranomasina ary ny mololo vita amin'ny taratasy.
Marcelo Guimaraes, biolojika an-dranomasina Resort, Masoivohon'i Pledge tsy misy plastika any Myanmar, dia nilaza fa miasa ho amin'ny plastika tsy mitondra plastika 100% ity toeram-pialofana ity, ka omena tavoahangy alim-pito azo alefa ireo vahiny. "Ny dian-tongotra tokana noforoninay dia ny rehefa mandeha amin'ireo morontsiraka lao ireo isika."
Ary koa ny morontsiraka Avaratra lehibe miaraka amoron-dranomasina milomano moramora, ny fialokalofana tropikaly dia manana coves sy helo eo akaiky eo ho an'ny snorkeling, paddleboarding ary kayak, miaraka amin'ny safidy hisitrika lavitra kokoa. Guimaraes dia namolavola hetsika ara-tontolo iainana sy rano ho an'ny vahiny ary koa manadihady ireo haran-dranomasina sy honko mba hahalalana ireo karazana ary mitady fomba hamporisihana ny fiarovana sy ny fiarovana, ao anatin'izany ireo mpanjono Moken sy Burmese.
Ny vondrona semi-mpifindra monina any Moken, izay nivory sy nisompatra tao amin'ny vondronosy nosy nandritra ny taonjato maro, dia nisy honina kely tao amin'ny helodrano iray 45 minitra miala ny toeram-pialan-tsasatra, raha eo akaikin'ny tanàna kely kosa dia tanàna lehibe kokoa an'ny mpanjono sy mpivarotra Birmana. . Ny jono tsy voafehy, anisan'izany ny fampiasana dinamita amin'ny jono 'fipoahana' sy ny fividianana an-tsokosoko an-tsokosoko ary fanondranana an-tsokosoko ny fiainana an-dranomasina amidy any Thailandy sy firenena hafa any Asia dia midika fa nihena ny karazana trondro sasany. Eo anoloan'ny toeram-pialan-tsasatra dia misy zaridaina amoron'ny haran-dranomasina hamerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ary hamorona toeram-ponenana trondro kokoa.
Voafetra tanteraka ny fidirana amin'ny Nosy Mergui Archipelago hatramin'ny tapaky ny taona 1990 raha avela hiditra ao amin'ilay faritra ny sambo mpisitrika liveaboard vitsivitsy, izay akaikin'ny sisintanin'i Thailand miaraka amin'i Myanmar. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny governemanta Myanmar dia namela nosy vitsivitsy hamboarina miaraka amin'ny toeram-pialofana tsy dia misy vokany ambany, na eo aza ny saram-panjakan'ny zaridainam-panjakana an-dranomasina dia mampitombo ny vola lany amin'ny fanomezana serivisy sy fotodrafitrasa rehetra ho an'ireo vahiny mahay manavaka.
150 minitra ny sambo haingana avy eo amin'ny seranan-tsambon'i Kawthaung mankany Awei Pila, miaraka amin'ireo vahiny tonga avy any Yangon renivohitra teo aloha Myanmar na eo amoron'ny lohasaha falehan-driaka be avy any amin'ny tanànan'i Ranong any Thailandy, akaikin'i Phuket.
Misokatra ara-potoana ny toeram-pialan-tsasatra, manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Mey, ivelan'ny vanim-potoana orana. Awei Pila, izay hanintona ireo mpivady, namana ary ireo izay mitady toerana mahafinaritra tsy lavitra ny valalabemandry miaraka amoron-dranomasina lao sy cocktails rehefa milentika ny masoandro, dia manolotra fonosana honeymoon mandritra ny telo alina mialoha ny fetin'ny mpifankatia, manomboka amin'ny $ 1690
Ny seranam-piaramanidin'i Kawthaung dia mety havaozina amin'ny ho avy handray sidina avy any Thailandy sy any amin'ny faritra hafa any Azia. Ny tsy fahatokisana ny serivisy manidina eo amin'ny Yangon sy Kawthaung dia midika fa nasaina nijanona alina tao Kawthaung ny vahiny, na amin'ny fijerin'ny filentehan'ny masoandro an'i Victoria Cliff, kintana 4, avy amin'ny $ 73) na ilay Grand Andaman kintana 5 nohavaozina avy amin'ny $ 85), miorina tandrifin'ny Kawthaung amin'ny nosy iray.
Ny mpitsidika an'i Awei Pila dia mila e-visa (https://evisa.moip.gov.mm)
ho an'i Myanmar, izay azo mora foana mialoha amin'ny $ 50.
Fanazavana fanampiny: aweipila.com
Fampitandremana: miampanga ireo mpandeha manandrana manangona bebe kokoa amin'ny sidina efa vita i Lufthansa
Mihombo ny voalavo any Barbados: niditra an-tsehatra ny minisitera
Niverina tany Costa Rica ny Southwest Airlines tamin'ny volana Jona